Agoonta Britain ee Suuriya ku xanibnaa oo gaaray London - BBC News Somali
Agoonta Britain ee Suuriya ku xanibnaa oo gaaray London
Image caption Carruurta ay waalidiintooda ka tirsanaayeen kooxda IS ayaa kasoo kala jeeda dalal badan
Koox carruur agoomo ah oo waalidiintooda ay kasoo jeedaan Britain, oo ku xayirnaa goobaha ay dagaallada ka socdaan ee Suuriya ayaa dib loogu celiyay Suuriya.
Carruurtaas ayaa ahaa kuwii ugu horreeyay ee laga soo qaaday waqooyiga-bari ee Suuriya, halkaasoo ay horay u maamuli jireen kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ee loo soo gaabiyo IS.
Maxkamadda saree e UK ayaa ka codsatay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda inuu gacan ka geysto soo dhoofinta carruurtaas.
Makxmadda ayaa loo sheegay inay London soo gaareen maanta oo Jimce ah, xaaladdooduna ay wanaagsan tahay, iyagoo la kulmay xubno kale oo ka tirsan qoysaskooda, kuwaasoo ay si wadajir ah isula quraacdeen.
Carruurtu khalad kuma laha dambiyada ay galeen waalidiintooda
Hay'adda samafalka Save the Children ee uu fadhigeedu yahay Britain ayaa qabta in dib usoo celintan ay noqon doonto uun billowga, waxayna bidhaamisay sida ay xaaladdan u tahay mid u baahan in si deg deg ah wax looga qabto.
Waxay qiyaastay 60 carruur ah oo Britain u dhashay ay ku xanniban yihiin halkaas, ayna xaalado adag ku heystaan xeryo ku yaalla waqooyiga Suuriya, iyadoo haddana uu soo dhowyahay xilliga qaboobaha aadka u daran.
Dooddan ayaa wada hareysay qaaradda Yurub iyo meelo kaleba.
Sidee ayaa carruurtan looga soo furdaamin karaa xeryaha qoysaska Daacish ee Suuriya?
Dagaalyahanada Suuriya oo "daacish ka qabsaday garoon" ku dhow Raqa
Lahaanshaha sawirka JEWAN ABDI/BBC
Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in carruur aan waxba galabsanin aysan ahayn inay u rafaadaan khaladaadka la sameeyay - ama dambiyada ay galeen waalidiintooda ku biiray kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ah.
Arrintan ma aha mid lala barbar dhigi karo khatar amni oo ay dadka waaweyn sababi karaan.
Waddamo badan - oo ay ka mid yihiin France, Denmark, Norway iyo Kazakhstan ayaa sidoo kale dib dalalkooda ugu ceshaday carruur noocaas ah.
Rajada la qabo ayaa ah in haddii lasoo celiyo ay yaraan karto suurtagalnimada in marka ay weynaadaan ay mintidiin noqdaan.
Dowladda Netherland oo khatar uga baqeysa inay carruurta soo ceshato
Image caption Ilaa 70,000 oo haween iyo carruur ah ayaa ku jira xerada al-Hol camp, oo ah tan ugu weyn waqooyiga Suuriya.
Maxkamadda racfaanka ee waddanka Netherland ayaa soo saartay xukun ay ku qeexeyso in xukuumadda waddankaas aysan ku khasbaneyn inay soo celiso carruurta Netherland kasoo jeedda ee ay waalidiintooda xubnaha ka ahaayeen kooxda Daacish.
Go'aankan wuxuu dhinaca kale u rogayaa ama meesha ka saarayaa xukun ay horay u soo saartay maxkamadda hoose.
Waxay maxkamaddu hore amartay in dib loosoo celiyo 56 carruur ah, balse waxay sheegtay in dowladda aysan waajib ku ahayn inay hooyooyinkoodana keento.
Dowladda Netherlands ayaa sheegtay inay halis tahay in la galo waqooyiga Suuriya, sidaas awgeedna ay caawin doonto oo kaliya dadka heysta dhalashada dalkooda haddii ay tagaan xafiiska diblomaasiyadda ee ay Netherlands ku leedahay Suuriya.
Waxay sidoo kale dood ka keentay in carruurta lasoo kaxeeyo iyagoo aysan la soconin hooyooyinkooda - kuwaasoo wali khatar amni keeni kara isla markaana ay tallaabadaas cadaawad ku abuuri karto xubnaha kale ee qoysaska.